Homeसमाचारभारतबाट आएकाहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, नेपालमा गम्भीर लाप’रवाही
March 22, 2021 admin समाचार 3325
छिमेकी मुलुक भारतमा दोस्रो चरणको संक्र’मण फैलि’एपछि नेपालमा पनि जोखिम बढेको सरोकारवालाहरूले औँल्या’एका छन् । आइतबार भारतबाट नेपाल आएका व्यक्तिमा कोरोनासंक्र’मण पुष्टि भएको राष्ट्रिय इपिडिमियोलोजी तथा रोग निय’न्त्रण महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार पश्चिम नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका एक नेपालीमा ए’न्टिजेन परीक्षण गर्दा संक्र’मण पुष्टि भएको हो ।
भारतमा कोरोना सं’क्रमण दर बढे पनि नेपालले खासै तयारी नगरेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा स’रुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीको भनाइ छ । जोखिम रो’क्न सीमानाकामा अपनाउनुपर्ने प्रभावकारी संयन्त्र र मुलुकभित्रै अप’नाउनुपर्ने जनस्वास्थ्य मापदण्डमा लापरवाही भइ’रहेको देखिएको उनले बताए ।
‘बसभित्र मास्कको प्रयोग भएको देखिँदैन, सड’कमा पनि मानिस खुलेआम हिँडेको देखिन्छ,’ उनले चिन्ता प्रकट गरे, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत लाप’रवाही छ । जोखिममा रहेका देशबाट आएका पर्यटक’लाई समेत होटल क्वारेन्टिनमा नराखी सीधै समुदायमा जान दिएको पाइएको छ ।’
भारतमा दोस्रो चरणको कोरोना फैलि’एको र कतिपय राज्यमा लकडा’उनसमेत भइसकेको छ । त्यहाँ कार्यरत नेपाली घर आउँदा संक्रमणको जो’खिम बढ्न सक्ने देखिएको छ । याे खबर आजको नागरिक दैनि’कमा छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्: अफगानिस्तान भ्रम’णमा रहेका अमेरिकी रक्षामन्त्री लियोड अस्टिन र राष्ट्र’पति असरफ घानीबीच आइतबार अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा भेट’वार्ता भएको छ ।
त्यस भेटका क्रममा उहाँह’रुबीच अफगानिस्तानमा अशान्ति मच्चा’इरहेका तालिबानहरुका विषयमा कुराकानी भएको थियो । तालिबानहरुसँग शान्ति वार्ता गर्ने विषयमा पनि सो कुरा’कानी भएको बताइएको छ ।
सो वार्ताका क्रममा अफगानिस्तानका राष्ट्रपति घानी र अमेरिकी रक्षामन्त्री अस्टिनले अफगानिस्तानमा ताबिला’नहरुले गरिरहेका हिंसाका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
अमेरिकी रक्षा’मन्त्री अस्टिन आइतबार बिहान अफगानिस्तान पुग्नुभएको थियो । उहाँले सो वार्ताका क्रममा अमेरिका अफगानिस्तानको सरकार र तालिबानका बीचमा शान्ति वार्ताका लागि सहजीक’रण गर्ने काममा तयार रहेको धारणा राख्नु’भएको थियो ।
अफगानिस्तानको सरकार र तालि’बानका बीचमा गत वर्षदेखि नै शान्ति वार्ता शुरु भएको भनिएको भए पनि अहिले त्यसले निर’न्तरता पाउन सकि’रहेको छैन । – न्युज24 बाट
October 29, 2020 admin समाचार 7791
June 19, 2021 admin समाचार 2658
January 28, 2021 admin समाचार 4254
आफ्नो व्याव’साय चलाउनकोलागी साउनीले नाचेर ग्राहकलाई मनो’रञ्जन दिंदछिन् र ग्राहक उनले दिएको मनोरञ्जनमा मनोर’ञ्जित हुन र उनको हातले पकाएको चिया नास्ता खान उनको पसलमा आउँछन् भन्ने सुन्दा अच’म्म लाग्न सक्छ । तर अच’म्मित मान्नु पर्दैन